काठमाडौंमा बालेनको चमत्कार, बढाए मतान्तर, कांग्रेस र एमालेको जोड्दा पनि बालेनकै बढी मत हुन् थाल्यो – Annapurna Post News
काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले एमाले र काँग्रेसका उम्मेदवारलाई लगातार पछि पार्न थालेपछि देशभरिका मतदातामा चासो बढेको छ, के बालेनले चुनाव जित्लान् ? एमालेका केशव स्थापित र कांग्रेसकी सिर्जना सिंहको ‘पोजिसन’ कस्तो होला ?
कुल ३२ वटा वडा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा चारवटा वडाको मात्रै मतगणना भइरहेको छ । ती वडाको गणना पनि सकिइरहेको छैन । यो स्थितिमा बालेन शाह, एमाले र कांग्रेसले अहिले ल्याइरहेको पोजिसनमा तलमाथि नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
काठमाडौं महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले दुई हजार भोट कटाएका छन् । पछिल्लो परिणामअनुसार शाहले २०७१ मत पाएका छन् ।
त्यस्तै मेयरमा एमालेका केशव स्थापितले ११६४ मत ल्याएका छन् भने कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले १००६ मत पाएकी छन् । काठमाडौंमा स्वतन्त्र उम्मेदवार शाहले क्रमशः मतान्तर बढाइरहेका छन् ।
कार दुर्घटनामा अस्ट्रेलियाका क्रिकेटर साइमन्डको निधन-अस्ट्रेलियाका पूर्वक्रिकेटर एन्ड्रियु साइमन्डसको कार दुर्घटनामा परि ४६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । अलराउन्डर साइमन्डसले सन् १९९८ देखी २००९ सम्म अस्ट्रेलियाबाट २६ टेस्ट, १९८ एक दिवसीय र १४ टी- ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका थिए ।
अस्ट्रेलियाले दुई पटक एक दिवसीय विश्वकप र सन् २००६-७ मा इङल्यान्डविरुद्धको एसेस शृंखला जित्दा उनी टोलीका प्रमुख सदस्य थिए । साइमन्डसले एक दिवसीयतर्फ १९८ खेलमा ३९ दशमलव ७५ को औसतमा पाँच हजार ८८ रन प्रहार गर्नुका साथै १३३ विकेट लिएका थिए ।
यसै वर्ष अस्ट्रेलियाका पूर्वस्पिनर सेन वार्न र विकेटकिपर रड मार्सको पनि निधन भएको थियो ।